laacib » Halyayga Man United Ee Phil Neville Oo Ka Hadlay Kulanka La Wada Sugayo Ee Manchester Derby Iyo Saamaynta Wayn Ee Uu Kulankani Ku Yeelan Doono Premier League.
Halyayga Man United Ee Phil Neville Oo Ka Hadlay Kulanka La Wada Sugayo Ee Manchester Derby Iyo Saamaynta Wayn Ee Uu Kulankani Ku Yeelan Doono Premier League.
Halyaygii hore ee laacibkii Manchester United ee Phil Neville ayaa ka hadlay saamaynta xoogan ee kulanka Manchester Derby uu ku yeelan karo horyaalka Premier Leaque isaga oo banaanka soo dhigay kala duwanaanshaha ka jira kulankan markii uu ka tirsanaa Red Devils iyo waqti xaadirkan. Phil Neville ayaa sheegay in waayihiisii ciyaareed ee Old Traffrod ay markasta u bixi jireen sidii ay Man City uga soo guulaysan lahaayeen balse ay xaaladu gabi ahaanba hadda isbadashay.
Phil Neville ayaa sidoo kale ku dooday in haddii ay Manchester United awoodi waydo in ay joojiso Manchester City in markaas ay laacibkii Guardiola awood buuxda u yeelan karto in ay xili ciyaareedka ku dhamaysan karto guuldaro la’aan. Ilaa hadda laacibkii Arsenal ayaa ah laacibkii haysata in ay guuldaro la’aan ku qaaday koobka Premier Leaque kaas oo ay samaysay xili ciyaareedkii 2003/04.
Phil Neville ayaa tababare ku xigaan ka soo noqday Manchester United xili ciyaareedkii uu David Moyes macalinka ka ahaa Old Traffrod laakiin Manchester City ayaa marti iyo minanba ku garaacday Red Devils iyada oo celcelsi ahaan labada kulan City guul ku gaadhay 7-1.
Phil Neville oo Sky Sports la hadlayay ayaa sheegay in ay jiraan tababarayaal isku dayi kara in ay Guardiola joojiyaan waxaana ka mid ah Mourinho wuxuuna yidhi: ” Kooxaha qaar ayay waajib ku tahay, haddii ayn United samayn kadib City xili ciyaareedka oo dhan ayay guuldaro la’aan ku jiri kartaa, sidaa ayay u fiican yihiin. Waa in kooxi ay isku taagto iyaga, waa in aan cagta-cagta u saaraan oo ay jabiyaan qaab ciyaareedkooda iyo diirada saaristooda, haddii uu hal tababare jiro oo samayn karaa Jose Mourinho oo mid”.
Phil Neville ayaa sheegay in waxa ugu xumi yahay in aad guuldaro kala kulanto laacibkii aad xifiltantaan wuxuuna xusay farqiga u dhexeeya waqtigiisii iyo hadda wuxuuna yidhi: “Sanadihii hore markasta oo aanu iyaga u tagayno waxaanu dareensanayn in aan soo guulaysanayno ciyaarta isla markaana si fiican ayaanu u soo guulaysan jirnay, kadib dhamaadkii waqtigaygii, City waxay noqotay halis dhab ah”.
Phil Neville oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Ma jiro dareen ka xun kubbada cagta oo aan ka ahayn in aad guuldaro kala kulanto City”. Xili ciyaareedkii hore kooxaha ree Manchester ayaa saddex jeer kulmay iyada oo Guardiola uu 2-1 guul ugaga soo gaadhay Mourinho halka United ay aarsatay kulankii EFL Cupka oo 1-0 ku garaacday City.
Laakiin kulankii Etihad Stadium ayay barbaro gool la’aan ah ku dhamaystreen iyada oo waxa kaliya ee laga hadlayay uu ahaa qaabkii uu Marouane Fellaini madaxa ugu herdiyay Sergio Aguero balse waxaa la filayaa in kulanka xili ciyaareedkan ugu horeeya ee Manchester Derby uu noqon doono mid saamayn wayn ku yeelan kara miiska kala saraynta Premier leaque iyo waliba tartanka koobka loogu Jiro.